धान रोप्ने समयमा मल पाइन्छ कि पाइदैन ? किसान अलमलमा - Jyotinews
धान रोप्ने समयमा मल पाइन्छ कि पाइदैन ? किसान अलमलमा
ज्योतिन्यूज २०७८ जेठ २६ गते १८:५५
काठमाडौं । कतिपय जिल्लामा धान रोप्न सुरु भैसकेको छ भने कतिपय ठाउँमा किसानहरु धान रोप्ने सुरसारमा छन् ।
धान रोप्ने समयमा राखिने डिएपी मल नपाएको किसानहरुको गुनासो छ । अब धान रोप्ने समयमा सजिलोसंग मल पाउने किसानको अपेक्षा छ । बाराको महागढीमाई नगरपालिकाका किसान जोगानन्द कलवारले ४ विगाहामा धान खेती गर्नुहुन्छ ।
जसका लागि डिएपी, युरीया र पोटास गरी लगभग १० क्विन्टल मल लाग्छ । यस पटक धानको बिउ राख्ने बेलामा त मल सहज रुपमा पाइएको छ । रोप्ने बेलामा पनि मलको यस्तै सहजता होस् भन्ने उहाँ चाहनुहुन्छ ।
सरकारले अनुदानमा दिने मल स्थानीय सरकारको समन्वयमा देशभरका ४६ सय सहकारी संस्थाबाट वितरण हुदै आएको छ । सरकारको तथ्याङ्क अनुसार अहिले दैनिक २५ सय मेट्रिक टनको हाराहारीमा मल विक्रि भइरहेको छ । तर पनि आवश्यकताका आधारमा मल नपाएको गुनासो भिमदत्त नगरपालिका २ कञ्चनपुरका किसान गिरीराज शर्माको गुनासो छ ।
देशभर झण्डै १५ लाख हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुने गरेको छ । जसका लागि डिएपी, युरीया र पोटास गरी १ लाख ६४ हजार मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्छ ।
तर मल विक्री वितरण गदै आएका कृषि साम्रगी र साल्ट टे«डिङ संग अहिले युरीया र डिएपी गरी ७९ हजार मेट्रिक टन मल मात्रै छ । कृषि साम्रगी कम्पनी लिमिटेडका प्रवक्ता विष्णु प्रसाद पोखरेल आवश्यकता अनुसार मलको जोहो गरिरहेको बताउनुहुन्छ ।
चीन र बंगलादेशबाट ५५ हजार मेट्रिक टन युरीया मल आउने क्रममा रहेकाले यस पटक मलको अभाब नहुने सरकारको दाबी छ । सरकारले वर्षेनी मलमा दिने अनुदानको रकम बढाउदै गएपनी मल खरिदको प्रक्रिया समयमा गर्न नसक्दा मलको अभाब दोहोरिरहने राष्ट्रिय किसान आयोगका अध्यक्ष प्रेम प्रसाद दंगालको भनाइ छ ।
नेपालमा वर्षेनी १२ लाख मेट्रिक टन मलको माग हुने गरेको भएपनि सरकारले ५ लाख मेट्रिक टन सम्म खरिद गर्दै आएको छ । जसका कारण किसानले मलको अभाब खेप्ने र चर्काे मुल्य तिरेर निजी डिपो वा भारतबाट लुकीछिपी मल खरिद गर्ने बाध्यता हटेको छैन ।